ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ နှစ်ပေါင်း ၁ဝဝ ကျော် သက်တမ်းရှိ ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံ တစ်ခုကို ဖြိုဖျက - Yangon Media Group
ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ နှစ်ပေါင်း ၁ဝဝ ကျော် သက်တမ်းရှိ ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံ တစ်ခုကို ဖြိုဖျက
မန္တလေး၊ နိုဝင်ဘာ ၁၇
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် ရုံးပေါင်းစုံဝင်းအတွင်းရှိ နှစ်ပေါင်း ၁ဝဝ ကျော် သက်တမ်းရှိ ကိုလိုနီ ခေတ်ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံတစ်ခုအား ပျက်စီးယိုယွင်းနေသည်ဟုဆိုကာ အစိုးရဌာနတချို့က ဖြိုဖျက်ရန် စီစဉ်နေမှုအား စိမ်းလန်း ပြင်ဦးလွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ နှင့် ပြင်ဦးလွင်မြို့ခံများက ကန့်ကွက်သည့်အနေဖြင့် နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်က သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ စာတင်ထားကြောင်း သိရသည်။
”မြို့နယ်ရုံးပေါင်းစုံ ဝင်းအတွင်းက ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံတစ်ခုကို ဖြိုဖျက်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့ကိစ္စကို ကန့်ကွက်ပါတယ်။ အဲဒီအဆောက် အအုံကိုဖျက်ဖို့ အစိုးရဌာနတချို့ က ကော်မတီဖွဲ့ထားတယ်လို့သိရတယ်။ တိုင်းဒေသကြီးဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌနဲ့ သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကို ကန့်ကွက်စာတင်မှာပါ”ဟု စိမ်းလန်းပြင်ဦးလွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးကိုကြီးက ပြောကြားသည်။ ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင် ယခင်က နှစ်ပေါင်း ၁ဝဝ ကျော်သက်တမ်းရှိ ရှေးဟောင်းကိုလိုနီခေတ် အဆောက်အအုံများစွာရှိခဲ့သော်လည်းပြုပြင် ထိန်းသိမ်းမှုမရှိခြင်းပျက်စီးယို ယွင်းနေသည့် အဆောက်အအုံများအား ဖြိုဖျက်ခြင်းများပြုလုပ်ခံခဲ့ရရာ ယနေ့ခေတ်တွင် ရှေးဟောင်းကိုလို နီခေတ်အဆောက်အအုံ ၃ဝ ခန့်သာ ကျန်ရှိတော့သည်။
”အခု ကျန်နေတဲ့ကိုလိုနီခေတ် အဆောက်အအုံတွေကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ပြင်ဦးလွင်မြို့ခံတွေကို လုပ်ပိုင်ခွင့်အပြီး အပိုင် ပေးလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့မှာ ရှိတဲ့အင်အားနဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတာတွေလုပ်သွားမယ်”ဟု ပြင်ဦးလွင်မြို့အကျိုးဆောင်ရွက်နေသူ ကိုတင့်က ပြောသည်။ ပြင်ဦးလွင်မြို့သည် ကိုလိုနီ ခေတ်အဆောက်အအုံများနှင့်ရာသီဥတု သာယာမှုတို့ကြောင့် ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားဧည့်သည်များအားဆွဲဆောင်နေသော မြို့တစ် မြို့ဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိနေသော ကိုလိုနီ ခေတ်အဆောက်အအုံတချို့ကို ပြု ပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမပြုလုပ်ဘဲ အစိုးရရုံးဌာနများနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများအဖြစ် အသုံးပြုနေမှုအပေါ် ပြင်ဦးလွင်မြိုခံများက ဝေဖန်ပြော ဆိုမှုများရှိနေကြောင်းသိရသည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်းက စစ်စခန်းချခဲ့သည့် White City သို့ လာရောက်သည့် ဗြိတိန်နိုင်ငံသား တစ်ဦးက ၎င်း၏ ဖ??
အိန္ဒိယနယ်စပ် မတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် တမူးနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးမှာ ယခင်ထက် ကျဆင်းဟု ဆို
မကြာခဏ မီးပျက်ခြင်းကြောင့် ဂက်စ်ဖြည့်ချိန် ပိုကြာလာသဖြင့် YBS ယာဉ် ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လိုင်?
ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကိုလိုချင်လျှင် အစိုးရ အပြောင်းအလဲ ရှိမည်၊ အစိုးရ အပြောင်းအလဲ မရှိဟု စိတ်ထာ?
ပဲကြီးဈေးများ မြင့်တက်သဖြင့် အောင်လံမြို့နယ် ပဲကြော် ပဲလှော် လုပ်ငန်းများ စားတော်ပဲများ ?
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကျေးဇူးကို သိတတ်သော ပြည်သူမှန်သမျှ ဘယ်တော့မှ မဆင်းရဲဟု သီတဂူဆရာတော် မ??
Fast & Furious ရုပ်ရှင်တွင် ဒွိန်းဂျွန်ဆင်နှင့်အတူ ပါဝင်လိုသော ဂျွန်စီနာ
နှစ် ၁၅ဝ သက်တမ်းရှိ ကနီမြို့နယ်မှ ကုန်းဘောင်ခေတ် လက်ရာ ညောင်ဝန်းနန်းရင်း ကျောင်းကို ပြခန်း?